ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘာသာဝင်အားလုံးကို ပက်ပက်စက်စက် စော်ကားပြောဆိုလိုက်တဲ့ လူ့ငနွား ရုပ်သံ
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘာသာဝင်အားလုံးကို ပက်ပက်စက်စက် စော်ကားပြောဆိုလိုက်တဲ့ လူ့ငနွား ရုပ်သံ ဒီလူကတော့ နိုင်ငံရေးသမားအဆိုမြင်ဝါဒီတစ်ယောက်လို့ ပြောမယ်ဆိုလွန်မယ်မထင်ပါ။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုလည်း ပြောတာပဲ။ သူဟာသူ သူ့ခံယူချက်နဲ့ နိုင်ငံရေးကြိုက်သလို လုပ်ပါ မပြောလိုပါဘူး။ သူများေ တွ ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်ရာကို ကိုယ်လည်း […]
မကြာခင် ထောက်ပံ့မည့် ကျပ်ငွေ(၄သောင်း) ဘယ်လိူလူတွေ ရကြမလဲ (အမြင်မမှားကြရအောင် ဖတ်ကြည့်ပါ)
မကြာခင် ထောက်ပံ့မည့် ကျပ်ငွေ(၄သောင်း) ဘယ်လိူလူတွေ ရကြမလဲ (အမြင်မမှားကြရအောင် ဖတ်ကြည့်ပါ) အစိုးရချပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စ ဖောင်အကြောင်း သိရှိစေရန် အစိုးရချပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကိစ္စမှာ မလျောက်တတ် မသိနားမလည်သူတွေ အများကြီး ရှိနိုင်တာမို့ အကြံပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီပို့စ် ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုသာ ထောက်ပံ့စရိတ်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုအမျိုးစားထဲမှာ […]
သူနဲ့တွဲတဲ့ ကောင်မလေး ကို အသားမဲပြီး သွားခေါတယ်လို့ ဆဲကြလို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို
သူနဲ့တွဲတဲ့ ကောင်မလေး ကို အသားမဲပြီး သွားခေါတယ်လို့ ဆဲကြလို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို ကိုယ့်ပြုသည့်ကံပဲတင်သံကိုယ်ထံ ပြန်လာပါမည် လူတိုင်းဟာရည်မှန်ချက် ကိုယ်စီဘဝကိုယ်စီနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီ ကမ္ဘာ ပထဝီမြေကြီးထဲမှာ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက် ရူနေကြတဲ့လူသားတွေပါဘဲ့ဘယ်သူကရုပ်ချောလို့အားပေးတယ် ဘယ်သူကအသားမ ည်းလိုအားမပေးဘူး လူသားအချင်းချင်းမှာ အသားမည်းတာဖွေးတာအသံကောင်းတာ အသံဆိုးတာက အရေးမကြီးပါဘူးလူတွေက အောင်မြင်မူတွေကို လိုလားကြတယ် […]
သရုပ်ဆောင်ဒွေးဟာ မင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ခဲ့ပီး အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲ သေခဲ့ရတာလို့ ပြောပြလာတဲ့ ဒွေးရဲ့ ဇနီးသည်။ ရုပ်သံ
သရုပ်ဆောင်ဒွေးဟာ မင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ခဲ့ပီး အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲ သေခဲ့ရတာလို့ ပြောပြလာတဲ့ ဒွေးရဲ့ ဇနီးသည်။ ရုပ်သံ သရုပ်ဆောင်ဒွေးဆိုတာ တစ်ချိန်းက အင်မတန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုသားကြီး ခေါ် ဒွေး ဟာဆိုရင်ဖြင့် နှလုံးရုပ်တရက် ရပ်တန့်ပီး သေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ပီပြင်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ယောက်ျားပီသချောမောတဲ့ သူ့ရုပ်ရည်ကြောင့် […]
Q centerမှာ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်းပေါ် အိပ်နေရတဲ့ သူတွေအတွက် ကုတင်လိုသလောက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အလှူတော် ရုပ်သံ ။ ဒီလိုပို့မျိုးမရှယ်ရင် လူပီသပါ့အုံးမလားဗျာ
Q centerမှာ ကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်းပေါ် အိပ်နေရတဲ့ သူတွေအတွက် ကုတင်လိုသလောက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အလှူတော် ရုပ်သံ ။ ဒီလိုပို့မျိုးမရှယ်ရင် လူပီသပါ့အုံးမလားဗျာ သူ့ ညီမ ကိုယ့်ညီမ..သူ့ သမီး ကိုယ့် သမီး …. ကိုယ်ဝန်ဆောင် တဲ့ အချိန် […]
အစ် နေ့မှာ အသတ်ခံရတော့မယ့် နွားကြီးကို ဝယ်ယူပြီး ပဲခူးသူ မမရဲ့ ထူးခြားဖြစ်ရပ်ဆန်း….
အစ် နေ့မှာ အသတ်ခံရတော့မယ့် နွားကြီးကို ဝယ်ယူပြီးမွေးစားလိုက်တဲ့ ပဲခူးသူ မမရဲ့ မယုံနိုင်စရာဖြစ်ရပ်ဆန်း သူမ အနေနဲ့ ဒီတစ်သက် ဒီနွားကြီး မသေမချင်း ပြုစုကျွေးမွေးသွား မယ်လို့ လည်းလာရောက် ကြည့်ရှူတဲ့ သူတွေ ကို အပျိုကြီးမမက ဂရု ဏာသံလေး နဲ့ရှင်းပြနေပါတယ် ။ဒီနွားကြီးကို သူနှစ်သက်တဲ့ […]
ထီထိုးထားသူများ လိမ်နည်းအသစ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင် သေချာဖတ်ပြီး ကူညီရှယ်ပေးကြပါ..
ထီထိုးထားသူများ လိမ်နည်းအသစ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင် သေချာဖတ်ပြီး ကူညီရှယ်ပေးကြပါ မိုးယံရွှေလမင်းနှင့်မြတ်ဆုကုဋေ ထီဆိုင်နာမည်သုံးပီ အကြီးစားလိမ်လည်မှုတွေ ရှိနေလို့ မနေ့ညက ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို sharing လုပ်ချင်ပါတယ်။ည9နာရီလောက် MT ဆီကို Phဆက်လာပါတယ် ကျတော်က မိုးယံကပါ အမ မိုးယံမှာဒီph no ပေးပီ ထီထိုးဖူးပါ သလားဆိုပီမေးလာပါတယ် ဟုကဲ့ထိုးဖူးပါတယ်လို့ […]
တို င်းနှင့်ပြည်နယ် ( ၃) ခုတွင် မိုးကြီးမည် ၊ မေလ ( ၂၉ ) ရက်နေ့ မိုးဇလ ထုတ်ပြန်ချက် .
တို င်းနှင့်ပြည်နယ် ( ၃) ခုတွင် မိုးကြီး မည် ၊ မေလ ( ၂၉ ) ရက်နေ့ မိုးဇလ ထုတ်ပြန်ချက် နေ့စဉ် မိုးလေဝ သသတင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ မေလ ( ၂၉ )ရက်နေ့ […]
ထီထိုးထားသူတိုင်းရတ်ကြပါ သိန်း(၁၅၀၀၀)ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ အဘွားက ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ ထီပေါက်စေတဲ့ဂါထာတော်
နိုဝင်ဘာ လ က သိန်း(၁၅၀၀၀)ပေါက်သွား ခဲ့ တဲ့ အဘွား ကပြန်လည်မျှဝေပေးလို က်တဲ့ ထီပေါက်စေတဲ့ဂါထာတော် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို ထီပေါက်တဲ့အဖွားပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပါသူဌေးမင်း ထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် […]
မာန်အောင်မြို့နယ်မှာ အလွန်လှပတဲ့ သန္တာကျောက်တန်းကြီးကို လူထောင်ချီလာရောက်ပြီး ချိုးယူလိုက်ကြပြီ ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာ
မာန်အောင်မြို့နယ်မှာ ဒီရေကျချိန် အလွန်လှပတဲ့ သန္တာကျောက်တန်းကြီး ပေါ်ထွက်လာလို့ လူထောင်ချီလာရောက်ပြီး ချိုးယူနေကြ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြို့နယ်၊ ပြင်ကောက်ကျေးရွာအနီး ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ဒီရေကျသွားချိန် အလွန်လှပသော သဘာဝ သန္တာကျောက်တန်းတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာသဖြင့် သွားရောက် ကြည့်ရှုသူများဖြင့် အထူးစည်ကားနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ မာန်အောင်မြို့မှ လူမှုရေးလူပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူ ကိုကျော်မိုးနိုင်က “ ဒီသဘာဝ […]